Showing posts with label woman-health. Show all posts
7/01/2014 04:45:00 PM woman-health
ပေါက်ပေါက်…မျှဝေသည် အပြည့်အစုံသို့ »
6/26/2014 04:45:00 AM woman-health
၂၂-၆-၂ဝ၁၄ အပြည့်အစုံသို့ »
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းက ကလေးအား ဘယ်သန်ဖြစ်စေနိုင်ရန် အလားအလာပိုများ
6/26/2014 04:39:00 AM woman-health
Durham နှင့် Lancaster့ တက္ကသိုလ်တို့မှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ မိခင်လောင်း၏ စိတ်ဖိစီးမှုက သန္ဓေသားအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုများရှိစေကြောင်း သိရသည်။ လေ့လာသူများက ယခုတွေ့ ရှိချက်မှာ လုံးဝအတိအကျကြီး မဟုတ်သေးသော်လည်း မိခင်တွင် စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းက ကလေးအား ဘယ်သန် ဖြစ်စေကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။ အချို့သူများ၌ ဘယ်သန်(သို့) ညာသန်ဖြစ်ရခြင်းမှာ မျိုးရိုးဗီဇက ပိုမိုသက်ရောက်မှုရှိစေပြီး လူတစ်ယောက်လုံး၏ ဘ၀ကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။ လေ့လာမှုတွင် လေးဖက်မြင်အာတရာဆောင်း အသုံးပြု၍ မိခင်လောင်းများအား ကိုယ်ဝန် ၂၄ ပတ်နှင့် ၃၆ ပတ်ကြားတွင် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် မိခင်အားလည်း ကလေးကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရစဉ် မည်မျှစိတ်ပင်ပန်းရသည်၊ စိတ်ဖိစီးရသည်ကို မေးခွန်းများမေးခဲ့သည်။ ထိုအခါ အာထရာဆောင်း ရလဒ်များအရ စိတ်ဖိစီးမှုများသော မိခင်၏ သန္ဓေသားသည် ဘယ်ဖက်လက်အား အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ မျက်နှာအား အကြိမ်များစွာ ပွတ် သတ်ပြီး၊ ညာလက်အသုံးပြုမှု သိသာစွာ ပိုနည်းကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။ ယင်းအခြေအနေမှာ ကလေးငယ်မှာ ဘယ်သန်ဖြစ်လာနိုင်သည့် အလား အလာ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထို့ ကြောင့် လေ့လာသူများက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်၌ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းနိုင်သမျှနည်းရန် လုပ်ဆောင်သင့်သည် ဟု အကြံပြုခဲ့သည်။
Health Updates Journal အပြည့်အစုံသို့ »
Credit: မြ၀တီ အပြည့်အစုံသို့ »
6/18/2014 02:41:00 PM woman-health
Myanma Spectrum အပြည့်အစုံသို့ »
6/17/2014 08:28:00 PM woman-health
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ အပြည့်အစုံသို့ »
6/17/2014 08:23:00 PM woman-health
အမျိုးသမီးများ မောပန်း နုံးချည့်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ
6/10/2014 11:05:00 AM woman-health
အမျိုးသမီးတွေ ခံစားရတဲ့ ထိပ်တန်း ကျန်းမာရေးဝေဒနာ ငါးခုမှာ မောပန်းနုံးချည့်တာက တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်နေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက မကြာခဏ မောပန်း နုံးချည့်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်း တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁) သိုင်းရွိုက် ပြဿနာများ
လည်ပင်းမှာ သိုင်းရွိုက်လို့ ခေါ်တဲ့ လိပ်ပြာပုံသဏ္ဌာန် ဂလင်းငယ်ကနေ ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က စွမ်းအင်ရဖို့ လောင်စာတွေကို ဘယ်လို အသုံးချရမယ်ဆိုတာကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်က အလုပ် လုပ်လွန်တာ ဒါမှမဟုတ် ချို့ယွင်းနေတာကြောင့် သင့်အနေနဲ့ အိပ်ငိုက်တဲ့ ခံစားချက်ကို တစ်ချိန်လုံး ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ပြဿနာတွေက အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
သိုင်းရွိုက် ဟော်မုန်းပမာဏနဲ့ သိုင်းရွိုက်အကျိတ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို သိနိုင်ဖို့ စစ်ဆေးမှုခံယူပြီး လိုအပ်သလို ကုသမှုကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
နှလုံးရောဂါကို အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ရောဂါလို့ ထင်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ နှလုံးရောဂါက အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နှလုံးကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းအရ အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်တာနဲ့ တခြား နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေနဲ့ သေဆုံးနိုင်ခြေက ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သေဆုံးနိုင်ခြေထက် နှစ်ဆနီးပါး ပိုမြင့်မားကြောင်း သိရပါတယ်။ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့အခါ နှလုံးကနေ သွေးကို အလုံအလောက် မညှစ်ထုတ်နိုင်တော့တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအနှံ့ သွေးရောက်ရှိမှု နည်းကာ မောပန်းနုံးချည့်မှု အဖြစ် များရပါတယ်။
အဝလွန်တာ၊ သွေးတိုးတာနဲ့ နှလုံးရောဂါမျိုးရိုး ရှိတာစတဲ့ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့ အချက်တွေသာ သင့်မှာရှိခဲ့ရင် နှလုံးကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုကို ခံယူသင့်ပါတယ်။
၃) ဗီတာမင်ဒီ ချို့တဲ့ခြင်း
လူတွေ ဗီတာမင်ဒီ ချို့တဲ့ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့မှု နည်းပါးလွန်းတာကြောင့်ပါ။ နွားနို့ကို မသောက်တာနဲ့ အသားအရောင် ရင့်လွန်းတာတွေကလည်း ဗီတာမင်ဒီကို နည်းပါးစေပါတယ်။ တချို့လူတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင်းက ဗီတာမင်ဒီကို ကောင်းကောင်း မစုပ်ယူနိုင်တာကြောင့်လည်း ဗီတာမင်ဒီ ချို့တဲ့တတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီ ချို့တဲ့တာက နာတာရှည် မောပန်း နုံးချည့်တာကို ဖြစ်စေနိုင်သလို အရိုးတွေရဲ့ သန်စွမ်းမှုကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်ဒီပမာဏကို ရရှိမှု ရှိ၊ မရှိ သိအောင် စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မလုံလောက်ရင် ဖြည့်စွက်ဆေးကို မှီဝဲပါ။ ၂၀၁၁ လမ်းညွှန်ချက်အရ လူကြီးတစ်ဦးဟာ တစ်နေ့မှာ ဗီတာမင်ဒီ ၆၀၀ အိုင်ယူ လိုအပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက် ၇၁ နှစ်ကျော်သူတွေအနေနဲ့ တစ်နေ့မှာ ဗီတာမင်ဒီ ၈၀၀ အိုင်ယူလောက် လိုအပ်ပါတယ်။
၄) သံဓာတ်ချို့တဲ့သော သွေးအားနည်းရောဂါ
သွေးတွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အောက်ဆီဂျင် အလုံအလောက် မသယ်ဆောင်နိုင်ရင် မောပန်း နုံးချည့်နေနိုင်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းတာက ရာသီလာစဉ်အတွင်း သွေးထဲကနေ သံဓာတ်များများ ဆုံးရှုံးတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးထဲမှာ သံဓာတ်ချို့တဲ့မှု ရှိ၊ မရှိ သိနိုင်အောင် သွေးစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ပါ။ ချို့တဲ့နေရင် သံဓာတ်အားဖြည့်ဆေးကို မှီဝဲပေးပါ။
အလုပ်၊ မိသားစုနဲ့ တခြားလူမူရေးကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်နေရချိန်မှာ ညတိုင်း ရှစ်နာရီလောက် အချိန်ပေးပြီး အိပ်စက်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုက အလုပ်ရှုပ်လွန်းတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေ ရှိတာကြောင့် အိပ်ချိန် အလုံအလောက်ရဖို့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ အဲဒီလို အိပ်ရေးမဝတာကြောင့် မောပန်း နုံးချည့်နေတတ်ပါတယ်။
အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပျော်အောင် နူးညံ့တဲ့ တေးသီချင်းတွေကို ဖွင့်ပြီး နားဆင်ပါ။ ခေါင်းအုံးပေါ်ကို လာဗန်ဒါရနံ့ဆီ ဆွတ်ပေးပြီး နာ့ဗ်ကြောစနစ် ငြိမ်သက်ပြီး အပန်းပြေအောင် လုပ်ပါ။ လက်ဖက်စိမ်း လက်ဖက်ရည် ဒါမှမဟုတ် ချာမိုမိုင်း လက်ဖက်ရည် သောက်ပြီး ပူပင်သောကကို လျှော့ချပါ။ အိပ်ရာထဲမှာ တလူးလူး တလိမ့်လိမ့်နဲ့ အိပ်မပျော်နိုင် ဖြစ်နေရင် ထပြီး လမ်းလျှောက်ကာ တခြား အပန်းပြေမယ့် အလုပ်မျိုး လုပ်လိုက်ပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာမှ အိပ်ရာထဲ ပြန်ဝင်ပါ။
၆) အိပ်ပျော်နေစဉ် ခေတ္တ အသက်ရှူရပ်သွားခြင်း
သင်အိပ်တဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ ဟောက်သံက လွှဖြတ်သလိုပဲလို့ သင့်ခင်ပွန်းက စနောက်လေ့ ရှိပါသလား။ ဟောက်တာက ရယ်စရာကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ ခေတ္တ အသက်ရှူရပ်သွားတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း အသက်ရှူနိုင်ဖို့ ထပ်ကာထပ်ကာ ကြိုးစားလေ့ ရှိတဲ့ အခြေအနေပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် များတာက အိပ်စက်ချိန်မှာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအပေါ် ဖိအားသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ရင်း ခဏတာ အသက်ရှူရပ်ရတာ ဖြစ်ပြီး သက်သာဖို့အတွက်ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၇) စိတ်ဓာတ်ကျ ရောဂါ
စိတ်ဓာတ်ကျတာနဲ့ မောပန်းနုံးချည့်တာက အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ဝေဒနာတွေပါ။ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ လူတွေက သူများတွေထက် လေးဆလောက် ပိုပြီး မောပန်း နုံးချည့်မှု ဖြစ်စေနိုင်သလို မောပန်းနုံးချည့်တဲ့ သူတွေကလည်း စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်ခြေ သုံးဆ ပိုများပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါကို ကုသမှုခံယူတာက သင့်ကို စွမ်းအင်တွေ ပိုရှိစေကာ လန်းဆန်းနေပါလိမ့်မယ်။ သင်ဘယ်လို ခံစားရတယ်ဆိုတာကို ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ စိတ်ကျ ကုသဆေးနဲ့ နှစ်သိမ့် ဆွေးနွေးမှုတို့ကို ခံယူလိုက်ရင် စိတ်ကျရောဂါက သက်သာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
6/08/2014 05:31:00 PM woman-health
Dr. တင့်ဆွေ အပြည့်အစုံသို့ »
5/28/2014 09:30:00 PM woman-health
Pregnancy and Painless childbirth ဗိုက်မနာဘဲ ကလေးမွေးခြင်း
5/28/2014 09:25:00 PM woman-health
နာတာကလဲ စောစောပိုင်းမှာ နာလိုက်၊ နားလိုက်၊ နောက် နာတာကြာပြီး နားတာက တိုလာတယ်။ နာပုံ-နာနည်းကလဲ တိုးသထက် တိုးနာတယ်။ စောစောက စကားစမြီပြောနေတဲ့ လူနာ ရှုံ့မဲ့လာမယ်၊ နောက် အော်လာမယ်၊ အသံ ကျယ်သထက် ကျယ်လာတယ်။ မွေးပေးမဲ့ ဆရာဝန်-ဆရာမတွေက မသနားလို့တော့ မဟုတ်ပါ။ ကျေနပ်မှု ရနေကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မွေးလူနာဟာ မွေးဖွါးဖြစ်စဉ် ပုံမှန် ဖြစ်နေတာကို သတိထားနေလို့ပါ။ Progress တိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ်က အတော် အရေးကြီးတယ်။ လူနာ အော်သံ တိတ်သွားရင် မကြိုက်ချင်ဘူး။ တနာရီတခါစမ်းလို့ သားအိမ်အဝဟာ လက် ၁လုံ၊ ၂ လုံး စသဖြင့် တိုးတိုး ပွင့်ရမှာက တန့်နေရင် မကြိုက်ချင်ဘူး။
အချက် (၇) ချက်ပြည့်စုံမှ ကလေး မွေးလမ်းကနေ ထွက်ပါမယ်။
1. Os full သားအိမ်အဝ လုံးဝပွင့်မယ်၊ ၁ဝ စင်တီမီတာ၊
2. Membranes rupture ရေမွှာပေါက်မယ်၊
3. Show သွေးနဲနဲနဲ့ အချွဲ ဆင်းမယ်၊
4. Desire to urinate and defecation ဆီးသွားချင်၊ ဝမ်းသွားချင် ဖြစ်လာမယ်၊
5. Anal pressure စအို ဝိုင်းလာမယ်၊
6. Bulge ညှစ်နေချိန်မှာ အပြင်ကစူလာနေတာ မြင်ရမယ်၊
7. Urge မဖြစ်မနေ ညှစ်ချင်လာမယ်။
မဖြစ်မနေ ညှစ်ချင်လာတယ်ဆိုတာကို မိခင်လောင်းက ထိန်းမရပါ။ နာမယ်မှန်း သိလျက်နဲ့ သူ့ခမြာ ညှစ်ပါမယ်။
အနာသက်သာဘို့ အထောက်အကူ ပေးနိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ရေ၊ သစ်သီးရည် များများ သောက်ပါ။ အုံးရည်သောက်ပါ။ အစားမာ လိုတာထက် ပိုမစားပါနဲ့။ ကလေးဖွါးနေတုံး ပျော်စရာ၊ ရီမောစရာတွေ ပြောဆိုပေးတာ ကောင်းတယ်။ တချို့က ဝါသနာပါရင် ကဘို့တောင် အကြံပေးတယ်။
ကလေးမွေးတာ အနာသက်သာအောင် လက်ခံထားတဲ့ နည်းတွေ ရှိတယ်။
1. အောက်စီဂျင် နဲ့ နိုက်ထရပ်စ်အောက်ဆိုက် အရောကို ရှူတာ ကလေးရော မိခင်လောင်းပါ စိတ်ချရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နာတာအကုန် မသက်သာစေပါ။
2. Epidural analgesia (အပီဂျူရယ်) ခါးထုံဆေး၊ အထိရောက်ဆုံးနည်း ဖြစ်တယ်။ ကလေး-မိခင် စိတ်ချရတယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ သုံးတယ်။ သုံးဘူးသူ ၈၅% မိခင်တွေက လိုလားနှစ်ခြိုက်ကြတယ်လို့ ဆိုတယ်။
Epidural analgesia (အပီဂျူရယ်) ခါးထုံဆေးနည်း
မေ့ဆေး-ဆရာန်ကသာ လုပ်ပေးမယ်။ ခါးရိုးမကြီးထဲမှာ ဦးနှောက်ကနေ အောက်ကို တန်းဆင်းနေတဲ့ အာရုံကြောမကြီး ရှိတယ်။ ခါးရိုးဆစ်တွေရဲ့နောက်က အထက်-အောက်တန်းနေတဲ့ ပြွန်လိုနေရာထဲမှာ အကာသုံးလွှာနဲ့ ဖုံးနေတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအာရုံကြောမကြီးကနေ ဘယ်-ညာ နှစ်ဘက်ကနေ အာရုံကြောတွေ ထွက်ပြီး ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ နေရာတွေကို အလုပ်လုပ် ပေးနေတာပါ။ အဖုံးလွှာတွေထဲက အပြင်ဆုံးအလွှာရဲ့ အပြင်နေရာထဲကို Indwelling catheter (ကသီတာ) ဆေးထိုးပိုက် သေးသေးလေးနဲ့ သွင်းပြီး Diluted anaesthetic drugs ထုံဆေး ထိုးပေးရတယ်။ သတ်မှတ် ထားတဲ့ Lumber vertebrae ခါးရိုးဆစ် နှစ်ခုကြားကနေ ထိုးတာပါ။ Indwelling catheter ကို ဆွဲမထုတ်ဘဲ ထားရတယ်။ အောက်ပိုင်းက ထုံနေပေမဲ့ လူနာက လုံးဝ သတိကောင်းနေတယ်။
လုပ်စရာ လုပ်ပြီးတာနဲ့ Epidural catheter ကိုထုတ်တယ်။ ဆက်တော့ ထုံနေပါအုံးမယ်။ ဘာလုပ်လုပ် အန္တရာယ်ဆိုတာ ရှိတာပါ။ ဒီလိုလုပ်ရတာမှာ သွေးဖိအားကျမယ်၊ ကလေးကို သတိထားရမယ်၊ အဆင်မသင့်လို့ အာရုံကြောထိမှာကို သတိကြီးရတယ်။ တချို့မှာ ခေါင်းကိုက်နေတတ်တယ်။ ကလေးမွေးဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်ပြီးမှ ဒီနည်းလုပ်မယ်-မလုပ်ဘူး ဆုံးဖြတ်ရတယ်။
ဒီနည်းကို Regular labor မွေးလမ်းက မွေးတာ၊ Cesarean Section ကလေး ဗိုက်ခွဲမွေးတာ Induced labors ကလေး တမင် မွေးလာအောင် လုပ်တာ၊ Forceps ညှပ်ဆွဲမွေးတာ၊ Vacuum လေဟာနယ်နဲ့ စုပ်မွေးတာတွေမှာ သုံးပါတယ်။
ကလေးမွေးတာမှာ မနာအောင် တမင်လုပ်ပေး မွေးတာကို Twilight sleep ခေါ်ကြတယ်။ အနုတ်ဘက်ကနေ ထောက်ပြတာတွေလဲ သိဘို့ သင့်ပါတယ်။
• မိခင်ဖြစ်မဲ့သူဟာ သူ့ရဲ့ Sense of responsibility တာဝန်ရှိတတ်မှုကို မေ့ထားရာကျတယ်။
• နောင်လဲဘဲ ကလေးဖွါးရတာ သာယာမှုလို့ ထင်မှတ်နိုင်တယ်။
• ခရစ်ယန် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တချို့က Sin against the will of God မကောင်းမှုလို့ ပြောတယ်။
• သဘာဝတရား မတားသင့်ဘူး။
• မွေးတဲ့အခါ သဘာဝအရ နာတာဟာ မိခင်နဲ့ကလေးကြား စည်းနှောင်မှုတခု ဖြစ်တယ်။
• ဗိုက်ခွဲမွေးရသူတွေမှာ ပိုလို့တောင် ရှိမယ်။
• ဒီလို စည်းနှောင်မှုမျိုး ဖခင်တွေက ဝယ်ယူမရနိုင်ကြပါ။
• ဆေးမှန်သမျှ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မကင်းပါ။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် (ပါရာစီတမော) ကနေ ကာရံမသင့်ရင် သေစေနိုင်တယ်လို့ ပြောရင် ငြင်းဘို့ ခက်တယ်။
မနာအောင် မွေးနည်းကို ၁၈၄၆ ကတည်းက စခဲ့တာပါ။ ဘုရင်မကြီး Queen Victoria ကလဲ အနာမခံနိုင်လို့ မေ့ဆေး-ထုံဆေး သုံးချင်ခဲ့တယ်။ Fanny Longfellow က ပဌမဆုံး မနာအောင် မွေးနည်းသုံးခဲ့တဲ့ အမေရိကန် First lady ဖြစ်တယ်။
ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း နောက်ကလေး မယူချင်တော့ပါဘူး ပြောသူ ရှိသလို၊ နုတ်အာကြမ်းသူတွေက သူနာနေတုံးမှာ သူ့ယောက်ျားကို ကျိန်ဆဲတတ်တယ်။ ကလေးကိုလဲ သန့်ရှင်း၊ သစ်လွင်နေတဲ့ အနှီးဖြူလေးနဲ့ပတ်ပြီး မိခင်လက်ထဲ အပ်လိုက်ရင်တော့ ပြုံးနိုင်သူတွေက များပါတယ်။
“ညီးကို မွေးပေးရတာ ဒို့အိပ်ရေး မပျက်ဘူး။ နောက် တယောက် မွေးရင်လဲ ဒီအချိန်ဘဲ လာခဲ့နော်” လို့ ပြောရင် -
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” လို့ ဖြေပါတယ်။
Pain relief during labor ကလေးမွေးရင် မနာချင်
Tubal ligation အမျိုးသမီး သားသမီး မရတော့အောင် လုပ်ခြင်း
5/28/2014 09:24:00 PM woman-health
1. သမီးကအခု၃၇နှစ်ထဲမှာပါဒုတိယကိုယ်ဝန်ကအခု၇လထဲမှာပါ။ Og ကမေးနေတာ သားကြော ဖြတ်မလား မဖြတ်ဘူးလားတဲ့ ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုး မသိလို့ သမီးမဖြေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။
2. ကြောက်တော့ ကြောက်တယ်။ မိန်းမတွေ သားကြောဖြတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း တင်ပြပေးပါဦးနော်။
အမျိုးသမီးများကို ရာသက်ပန် သား-သမီးမရအောင် လုပ်နည်း Permanent Sterilization ၂ နည်းရှိတယ်။ အများဆုံးသုံး-အများလည်း သိတဲ့နည်း ကတော့ သားအိမ်ပြွန်ကို ခြည်-ဖြတ်နည်းပါ။ သားအိမ်ပြွန်ထဲကို (စပရင်) လိုတခု ထည့်ပေးနည်းက နောက်တမျိုးပါ။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ လက်လှမ်းမီကြမဲ့ ပဌမနည်းကိုဘဲ ရေးပါမယ်။
အမျိုးသမီးများဟာ အရွယ်ရောက်ချိန်ကစပြီး သွေးမဆုံးခင် အချိန်အထိ လစဉ်-လတိုင်း မ-မျိုးဥအိမ်ကနေ မ-မျိုးဥ တလုံး ထွက်ပေးနေတယ်။ ရာသီမှန်နေသူကို ပြောတာပါ။ ဥက တကယ်လို့ ကျားသုတ်ပိုး ဝင်လာမယ်ဆိုရင် သားအိမ်ပြွန်ခေါ်တဲ့ ချိုနဲ့လည်းတူတဲ့ နှစ်ချောင်းလည်းရှိတဲ့ အခေါင်းပါပြွန်ရဲ့ အပြင်ထိပ်ပေါက်နေ သားအိမ်ထဲကို ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ပြွန်ထဲမှာ ဖူးစာဆုံ-ပေါင်းစပ်ရာကနေ သန္ဓေတည်-ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတယ်။ သူတို့တတွေ မတွေ့-မဆုံ-မပေါင်းစပ် နိုင်အောင် ပြွန်လမ်းကို အသေပိတ်လိုက်တဲ့နည်းက Tubal Ligation ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းမှာလည်း ၂ နည်းရှိတယ်။ Laparoscope ပစ္စည်းကရိယာ စုံတဲ့နေရာမှာဆိုရင် အပြင်လူနာ အနေနဲ့၊ ထုံဆေးနဲ့ လုပ်လို့ ရတယ်။ တိုင်းပြည် အများအပြားမှာတော့ ဆေးရုံ ခဏတင်၊ ခါးထုံဆေးနဲ့ ခွဲပေးတတ်တယ်။ မကြာပါဘူး။ ခွဲပြီး ၇ ရက် ချုပ်ရိုးဖြေတာ မစောင့်ချင်ရင် စောစော အိမ်ပြန်လွှတ်မှာပါ။ ကလေးမွေးပြီး၊ ၂ ပါတ် အတွင်းခွဲရင် ဆရာဝန် အတွက် ပိုလွယ်တယ်။ သားအိမ်က မြင့်နေသေးတာမို့ အောက်အတွင်းထဲအထိ နှိုက်စရာ မလိုဘူး။ ဘယ်နည်းနဲ့ ခွဲခွဲ ခွဲစိတ်တဲ့ နေရာက နာတာသက်သာတာနဲ့ အိမ်ထောင်နဲ့အတူ ပြန်နေလို့ရတယ်။ ဗိုက်ခွဲမွေးရင်းလည်း လုပ်ပေးလို့ရတယ်။
၉၉့၅% ထိရောက်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီအထဲမှာ သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်တာတော့ ကံမကောင်းရင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ အတော်တော့ ရှားပါတယ်။ အဲလို ချည်-ဖြတ်ပြီးမှ ပြန်လိုချင်ပြန်လို့ နောက်ထပ် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရသူတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တာ ပိုများတတ်တယ်။ နောက် ရှားတာလေးတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ရာသီဖြစ်စဉ်ေ ပြာင်းသွားလို့ လာတဲ့အချိန်မှာ နာတာ၊ ကြားရက် ဆင်းတာ၊ မလာဘဲ နေတာ။ ဒါလဲ ဖြစ်တဲ့သူ မများလှပါဘူး။
အားကောင်းချက်တွေ အရင် သိရအောင်။ ရာသက်ပန် ကလေးမရတော့ပါ။ ချက်ချင်း ထိရောက်တယ်။ မလိုချင်တော့တဲ့ ကလေးရမှာ ကြောင့်ကျမှု ကင်းသွားမယ်။ ကုန်ကျစရိတ် မများပါ။ မ-မျိုးဥအိမ် ကင်ဆာ ဖြစ်တာ နည်းတာကို တွေ့လာရတယ်။ သားကြောဖြတ်ထားသူ အမျိုးသမီးမှာ ဆက်ဆံစိတ်မျိုး ဘာမှ ထူးခြား ပြောင်းလဲစရာ မရှိပါ။ တချို့ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရမှာမျိုး စိုးရိမ်စိတ် မရှိတော့တာမို့ ပိုလို့တောင် စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသေးပါတယ်။ အဲ့ ခင်ပွန်းအပေါ် သစ္စာ စောင့်ရပါလိမ့်မယ်။
အားနည်းချက်တွေလဲ သိထားပါ။ ခွဲစိတ်တာ ခံရမယ်။ ယောက်ျားတွေကို လုပ်ရတာထက် နည်းနည်း ရှုတ်ထွေးတယ်။ ပြန်ဆက်ချင်ရင် ပိုခက်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခိုင်မာပြီးမှ လုပ်သင့်တယ်။ ဒါတောင် ယောက်ျားတွေကို လုပ်ကြတာထက် အဆ ၄ဝ အမျိုးသမီးတွေမှာ လုပ်နေကြပါတယ်။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကို မကာကွယ်ပါ။
တကမ္ဘာလုံးမှာ အမျိုးသမီး ၃၃% က ဒီနည်းလုပ်ထားကြပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ တိုင်းပြည်တွေမှာကြ ရာနှုန်းပိုများတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဥပဒေအရ Sterilization board ကနေကျမှ လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ လူဦးရေများတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ အလကား လုပ်ပေးတယ်။ အားပေးတယ်။ တချို့ဆီမှာ အတင်းအဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းတယ်။
ဒုက္ခသည် ဆေးခန်းမှာ ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် အလကား လုပ်ပေးပါ့မယ် ပြောထားတယ်။ ထည့်နိုင်ရင်တော့ နည်း-များမဆို အလှူငွေလေး ထည့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုထိ တယောက်မှ မလာပါ။ သူတို့ Destination တိုင်းပြည်တွေမှာ ကလေးပါရင် ချမ်းသာတယ် ကြားထားကြတာကိုး။
Q: ကျနော့်အသက် ၅၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကလေး ၂ ယောက်ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက ကျနော်တို့ လင်မယား တိုင်ပင်ပြီး ကျနော် သားကြောဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖြတ်ပြီးပြီးချင်းတော့ ဘာမှသိပ်မသိသာပါဘူး။ ယခု ပြီးခဲ့သော သုံးလကျော် လေးလခန့် မှစ၍ ပန်းသေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆေးမသုံးဘူး၍ ဘာဆေးသုံးရမှန်း မသိပါခင်ဗျား။ ပျားရည်ဖြင့် ကြက်သွန်ဖြူ စားသော်လည်း မထူးခြားပါ။ စိတ်ပါလာ သော်လည်း ချက်ခြင်းပြန်ကျသွားပါသည်၊ ကျနော် ယခု ရောက်ရှိနေသော နေရာက (့) နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော် ပုံမှန်စားနေရသော အစာအိမ်ဆေးရှိပါသည်၊ Histac, Neotac မြန်မာပြည်မှာတုန်းက စားတာပါ။ ယခု ထိုဆေးများ ဝယ်မရ၍ Ranidine 150mg ကို စားနေရပါတယ်။ သောက်နေရသော ဆေးများနှင့် ဖြစ်နေသော အခြေအနေနဲ့ သက်ဆိုင်သလား မသိပါ။ နောက် သားကြောဖြတ်ပြီးမှ ဖြစ်တာ ဆိုတော့ ဆိုင်သလား။ အသက်အရွယ်ကြောင့်လား။
A: သားကြောဖြတ်လို့ တိုက်ရိုက် ပန်းသေတာမျိုး မဖြစ်စေပါ။ သိပ်ကြီး မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ကျား-ဟော်မုန်းက Testis အစေ့ကနေ ထွက်တာပါ။
လောလောဆယ် အကြံပေးချင်တာက Virgra ဆေးသောက်ပါ။ နာမည် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဝယ်လို့ရတာတယ်။ အိန္ဒိယကလာတာ Vigora စသဖြင့်။ ဆေးရှာရလို့ ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ မသိရင် မေးနိုင်ပါတယ်။ ၅ဝ-၁ဝဝ အားလာတယ်။ 50 mg ဆိုရင် တနေ့တွက် လုံလောက်တယ်။ အသုံးပြုချင်တဲ့နေ့၊ အချိန်မှာသာ ၁၅-၃ဝ မိနစ် ကြိုသောက်ယုံသာ လိုပါမယ်။
အစာအိမ်ဆေးတွေကလဲ အဲလိုမဖြစ်စေပါ။ အရွယ်ကလည်း သိပ်မကြီးသေးပါ။ တယောက်နဲ့ တယောက်တော့ မတူပါ။
စိတ်မှာ ရှင်းလိုက်ပါ။ ဒီစိတ်မျိုးက တခါတလ နည်းတတ်တယ်။ ပြန်တက်လာမှာ သေခြာပါတယ်။ ဆေးကလည်း အတော်ကို စွမ်းပါတယ်။
Pregnant after tubes are tied သားကြောဖြတ်ပြီး ကလေးပြန်ရချင်တယ် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/10/how-to-get-pregnant-after-tubes-are.html
5/28/2014 09:16:00 PM woman-health
5/27/2014 05:17:00 PM woman-health
ဒေါက်တာတင်ဆွေ အပြည့်အစုံသို့ »
5/26/2014 04:35:00 PM woman-health
5/21/2014 07:13:00 PM knowledge woman-health
5/06/2014 10:12:00 AM woman-health
Gandawin Magaazine အပြည့်အစုံသို့ »
5/05/2014 01:01:00 PM woman-health
ရာသီစောပေါ်သည်ဖြစ်စေ၊ နောက်ကျပေါ်သည်ဖြစ်စေ၊ နည်းလာသည်ဖြစ်စေ၊ များလာသည်ဖြစ်စေ၊ အားလုံးကို ရာသီမမှန်ခြင်းဟုသတ်မှတ်ပါတယ်။ ရာသီမမှန်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ဤဆောင်းပါးကို ဂန္တဝင် မဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားတင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အင်မတန် အင်အားစိုက်ထုတ်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကြောင့် စွမ်းအင်ကုန်ခမ်းမှု များသွားပြီး လစဉ်ရာသီလာချိန်တွင် အားနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သားဆက်ခြားဆေးတွေကြောင့်လည်း ရာသီပုံမှန်လာခြင်းကို အနှောက်အယှက် ပေးနိုင်ပါတယ်။
အရက်အလွန်အကျွန်သောက်သုံးခြင်းကြောင့် အသည်းထိခိုက်သွားမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီး hormones များကို ကောင်းစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ရာသီလာခြင်းကိုထိခိုက်စေပါတယ်။
သားဥအိမ်ထဲမှာ ရှိသော cyst ခေါ် အရည်အိတ်လေးများ ပြောင်းလဲလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပ်ါလာတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ ဒီရောဂါမျိုးကလည်း ပုံမှန်သားဥကြွေချိန်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။
ရာသီမမှန်ခြင်းတွေက သွေးမဆုံးမှီ (၁၀)နှစ်လောက် အလိုမှာစတင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက် (၄၀)နှင့် (၅၀) ၀န်းကျင် အမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။
ဆေးဝါးပုံမှန်မှီဝဲနေခြင်းကြောင့် ရာသီစက်ဝန်းကို (၁)ရက်(၂)ရက်လောက် နောက်ကျစေပါတယ်။ ဆေးဝါးတော်တော်များများက အိစတိုဂျင်(estrogen) နှင့် ပရိုဂျက်စတီရုန်း(progesterone) ထုတ်လုပ်မှုတွေကို အကျိုးသက်ရောက်စေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမျိုးဟာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ထိမိခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားခြင်း နှင့် ကင်ဆာရောဂါရှင်များတွင် chemo ဆေးသွင်းကုသခြင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကဲ ရာသီမမှန်ခြင်းတွေကြောင့် စိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးလေးများ ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြီး ဗဟုသုတရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
5/04/2014 05:05:00 PM woman-health